हतोत्साही भएर चलचित्र व्यवसाय चल्दैन : दीपक श्रेष्ठ - Nepal News - Latest News from Nepal
काठमाडौं: २०५३ सालमा निर्मित चलचित्र गाउँलेबाट निर्देशकका रूपमा डेब्यु गरेका दीपक श्रेष्ठ नेपाली चलचित्रमा सफल निर्देशक मानिन्छन्। पहिलो चलचित्रको सफलतापछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। इन्टरनेसनल नेपाल फिल्म एकेडेमी (इन्फा)का अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ निर्देशित २६औं चलचित्र ‘बाचा’ रिलिजको तयारीमा छ। यिनै विषयमा अशोकप्यासी राई र निर्देशक श्रेष्ठबीच भएको कुराकानी :
भूकम्पको विपत्तिकै बेला चलचित्र ‘बाचा’ लगाउन लाग्नुभयो?
अहिले सबै हलले नयाँ चलचित्र पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसैले भूकम्पपछि दर्शकलाई पहिलो ताजा चलचित्र दिन लागेको हुँ। हतोत्साही भएर चलचित्र व्यवसाय चल्दैन। दु:खका बेला पनि आँट गर्न सक्नुपर्छ।
दर्शकले हेर्नैपर्ने के छ ‘बाचा’मा?
चलचित्र ‘बाचा’ आफ्नै घरआँगन, छरछिमेकमा भइरहने घटनामाथि बनेको छ। परिवार एक हुँदा कति बलियो हुन्छ र विग्रह हुँदा घर कसरी बिग्रन्छ भन्ने देखाइएको छ। एकआपसमा मिलेर बाँचौं भन्ने सन्देश छ। चलचित्र हेर्दा दर्शकलाई गाउँघर पुगेको अनुभव हुन्छ। गीतसंगीत पनि राम्रो छ।
यस्तो विपद्मा चलचित्र हेर्न दर्शक आउलान्?
सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। मैले पनि दर्शकबाट साथ पाउने अपेक्षा राखेको छु। भूकम्पका कारण पीडामा रहेका दर्शककै लागि मैले नयाँ चलचित्र दिएको हुँ। नयाँ चलचित्र हेरेर मनको बह र त्रास कम होस् भन्ने मेरो चाहना हो। हङकङ र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको सोबाट प्राप्त फिडब्याकले पनि मलाई उत्साहित बनाएको छ।
‘बाचा’ रिलिजपछिको योजना?
‘बाचा’ रिलिजसँगै म इन्फा अवार्डको तयारीमा छु। यो अवार्डको दोस्रो संस्करण अगामी सेप्टेम्बरमा हङकङमै हुँदैछ। अस्ट्रेलियामा छायांकन हुने नयाँ चलचित्रको स्क्रिप्टको काम भइरहेको छ। नामचाहिँ तय भएको छैन।
आफूले निर्देशन गरेकामध्ये मन पर्ने चलचित्र?
विषयवस्तु मन नपरी काम गर्ने कुरा हुँदैन। यस अर्थमा सबै राम्रै लाग्छ। तापनि ‘अजम्बरी माया’, ‘तक्दिर’ मलाई बढी चित्त बुझेका चलचित्र हुन्। चलचित्रमा कस्तो विषयवस्तु छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।
जीवनका बाँकी समय चलचित्र क्षेत्रमै बिताउनसक्ने आँट छ?
म त चलचित्र क्षेत्रमै जीवन बिताएको मान्छे। अब पनि यो क्षेत्रबाट अलग हुने कुरा कल्पनै गर्न सक्दिनँ।
नेपाली चलचित्रका नकारात्मक पक्ष के लाग्छ?
चलचित्र डिजिटलाइज भएपछि संख्यामा वृद्धि भयो। एकै सातामा तीनचार चलचित्र रिलिज भएपछि दर्शकले कुन चलचित्र हेर्ने? अहिले मागभन्दा चार गुणा बढी चलचित्र बनिरहेको छ।
यसका लागि के गर्न सकिन्छ त?
थोरै तर राम्रो चलचित्र बन्नु पर्‍यो। चलचित्र निर्माणका लागि मापदण्ड भएन। घरघरबाट हातहातमा ससाना क्यामरा बोकेर चलचित्र बनाउने अनि ठूला र आकर्षक पोस्टर राख्ने प्रवृत्तिले नेपाली चलचित्रलाई धराशयी बनाएको छ।
कहिलेकाहीँ अन्य क्षेत्रमा लागेको भए हुने रहेछ भन्ने लाग्दैन?
कलाक्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई पैसाभन्दा दर्शकको माया र इज्जत ठूलो कुरा हुने रहेछ। अझ म त चलचित्र क्षेत्रमै जीवन बिताउँछु भनेर प्रण गरेको मान्छे, त्यस्तो सोच आउँदैन।
घरपरिवारबाट त यस्तो कुरा आउँछ होला?
हाइहेलो अनि नाम भनेरमात्रै हुँदैन, पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरा त हुन्छ। त्यसलाई नकार्न पनि सकिन्न। तापनि मेरो कामबाट सबैले गर्व गर्छन्।
छोराछोरी चलचित्र क्षेत्रमा आऊन् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन?
सानो हँुदा मेरा छोराछोरीले बालकलाकारका रूपमा विभिन्न चलचित्र, विज्ञापनमा अभिनय गरेका छन्। तर उमेर पुगेपछि यो क्षेत्रमा रुचि देखाएनन्। उनीहरूले नचाहेपछि मेरो चाहनाले मात्रै भएन।
किन रुचि नदेखाएका होलान्?
कलाकार भएपछि सामाजिक अवस्था राम्रो हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिँदैन। कलाकारका बारेमा आउने गरेका अनावश्यक विवाद, विग्रह देखेर, पढेर पनि हुनसक्छ।
बक्स अफिस कार्यान्वयन हुने कुराले हर्षित हुनुहुन्छ होला?
यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। पारदर्शी व्यवसायका लागि बक्स अफिस आवश्यक छ। तर कसरी सक्रिहुन्छ, कसले अपडेट गर्छ, निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।
चलचित्रको वर्गीकरणको कुरा उठेको छ?
मान्छेको स्किलको वर्गीकरण हुन्छजस्तो लाग्दैन। स्वतन्त्र रूपमा सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ। व्यावसायिक चलचित्रकर्मी भएकाले चलेको चलचित्रलाई राम्रो भन्ने मान्छे हुँ।
चलचित्र नीति लागू हुने अवस्थामा छ, कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ?
नीति लागू हुनासाथ नेपाली चलचित्र हेर्न दर्शकको ओइरो लाग्ने होइन। त्यसैले नीतिभन्दा चलचित्रको गुणस्तर ठूलो कुरा हो। विश्वभरका चलचित्र छाडेर नेपाली चलचित्र नै हेर्न हलमा किन जाने भन्ने कुरा त चलचित्रले नै तय गर्ने हो। यति हो, नीतिले संस्कार बसाउन सक्छ।